ကြောင်ချေးနှင်.နက်(စ်)ကော်ဖီ - Myanmar IT Development
Posted by မုိးဇက္ on November 19, 2012 at 6:30pm
ကဗျာဆိုတာကပျာကယာရေးတဲ.အရာဟုထင်မှတ်နေခဲ.သည်။ကဗျာဆိုလို.စာရေးဆရာကြောင်ချီးရေးသောကဗျာ များကိုကျွန်တော်ကြိုက်သည်။သူဧ။်စာများနဲ.ကဗျာများသည်ပျော.ပျော.လေးနဲ.ရနံ.သင်းသည်။သူစာ၊ သူကဗျာများသည်မန်းမှုတ်၍မရသောဘုန်းကြီးတစ္စေနဲ.အလားတူသည်။ဒါမို.လဲစာရေး
ကြောင်နက်ကြီးတစ်ကောင်မွေးမြုူအံ.ဟုဆုံးဖြတ်လို်က်လေသည် ဟူသောကြောင့် ကြောင်နက်ကြီးတစ်ကောင်အား ကိုမိုးဇက်ဆီသို့ ခင်မင်မှုဖြင့်လက်ဆောင်ပေးပို့ပေးသောမြားနတ်မောင်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဟုတွေးမိလေသည်။ Views: 119
Tags: မုိးဇက္ Like0members like this
< Previous Post Comment by Shine on October 21, 2009 at 3:43pm ေၾကာင္နက္ၾကီးတစ္ေကာင္ေမြးျမဳဴအံ.ဟုဆုံးျဖတ္လုိ္က္ေလသည္ ဟူေသာေၾကာင့္ ေၾကာင္နက္ၾကီးတစ္ေကာင္အား ကိုမိုးဇက္ဆီသို႔ ခင္မင္မႈျဖင့္လက္ေဆာင္ေပးပို႕ေပးအံ့
Comment by Nay Min on October 21, 2009 at 4:18pm that nice idea Comment by pwepwe on October 21, 2009 at 8:04pm ဟားဟား
ေနာက္လည္းထပ္ေရးပါအံုး Comment by ဂ်ယ္ေလး (jellay) on October 22, 2009 at 12:24am ဟယ္ အဲ့ေၾကာင္ကေတဇာေၾကာင္မလားးးး နင္တို ့ေနာ္ဇြတ္မလုပ္က်ပါနဲ့ ေတဇာကို .... ဟိဟိ Comment by mayshinnnyo on October 22, 2009 at 11:52am လက္ေဆာင္လာေပးတာ။ Comment by paneiphyu on October 22, 2009 at 12:48pm ေႀကာင္နက္နဲ့ေကာ္ဖီဆိုေတာ့းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး Comment by Swe Thet Paing on October 22, 2009 at 5:51pm ေၾကာင္နက္ဆိုလို.------1994 ေလာက္ကရံုတင္သြားတဲ ( BLACK CAT ) ဆိုတဲ.ဇာတ္ကားေလးကိုသတိရမိတယ္..... Comment by aye chan khine on October 22, 2009 at 7:00pm အင္းးး ေကာ္ဖီေတာင္ မေသာက္ခ်င္ေတာ့ဘူး Comment by ေတဇာ on October 22, 2009 at 7:38pm ဖတ္သြားပါတယ္။ ေကာင္းတယ္.. း) Comment by jasmine on October 23, 2009 at 10:19am ေၾသာ္---တရ္ရင္း က ေၾကာင္နက္လိုခ်င္တရ္ ဆိုေတာ့ လည္း---ရွာေပးရတာေပါ့ --
ေကာင္း2ေတာ့ေမြးေနာ္ :) Comment
You need to beamember of Myanmar IT Development to add comments!
Join Myanmar IT Development
Welcome toMyanmar IT Development
Zawgyi => Unicode
Paypal မှတဆင့်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်၊ အောက်ကခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
How to Unlock Sony Ericsson Xperia MT 15i
How to solve shortcut virus error
ZawGyi to Unicode Online Converter အတွက် HTML ကုတ်လေးများရနိုင်မလားခင်ဗျာ။ ကူညီကြပါဦး။
Myanmar Font for Samsung Galaxy S4
မြန်မာယူနီကုတ်သုံးပြီး Microsoft Word 2007 မှာ ဘယ်လိုစာရိုက်ရမလဲ အခုစာရိုက်တာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။
laptop connection to phone
DeepFreeze password ေလးေမံသြားလို႕ပါ
win 8 က regiter ပါ
တတိယအကြိမ်မြောက် ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် ကဆုန်လပြည့်နေ့အတွက် အအေးဒါန ကုသိုလ်ယူရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
MMiTD တွင် နည်းပညာအမျိုးမျိုးအား မျှဝေပေးနေသူများအတွက် 2012 အထူးအစီအစဉ်
ဘန်နာပြိုင်ပွဲ ဆုရသူများနှင့် အမှတ်တယ လက်ဆောင် ကိစ္စ
MMITD Banners & Logo Design ပြိုင်ပွဲ
ပြိုင်ပွဲအတွက် လိုဂို နှင့် ဘန်နာ အကြိုစုဆောင်းခြင်း။
မြန်မာအိုင်တီ ဆိုဒ်လေးအတွက် ရန်ပုံငွေ(ဆိုဒ်ဖန်ငွေ) ထားရှိရန် ဆွေးနွေးခြင်း
ယူနီကုဒ်သုံးသော ၀ဘ်ဆိုဒ်များတွင်စာဖတ်ဖို့အဆင်မပြေသူများ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပေးပါ။(အရေးကြီး)
© 2013 Created by MMITD. Badges | Report an Issue | Terms of Service